साथी!! - Blogs of Sagar Prasai
म कक्षा १० मा पढ्दा मेरो कक्षाकोठा एक तला माथी थियो। हरेक बिहान मलाई एकजना दाईले आफ्नो रिक्सामा स्कुल लगिदिनुहुन्थ्यो र वहाँले नै बोकेर कक्षा कोठामा राखिदिनुहुन्थ्यो। साँझ स्कुल छुट्टी भएपछि, फेरी तिनै दाई आएर मलाई बोकेर तल लानु हुन्थ्यो। यस्तो गर्नुपर्दा मलाई शौचालय जान चाहि निकै गार्हो हुन सुरू भयो।
अघिल्ला बर्षहरूमा, तल्लो तलामै कक्षाकोठा हुँदा त मलाई साथीहरूले टिफिन टाईममा शौचालय लैजान्थे। शौचालय पनि नजिकै भएकाले उनीहरूलाई मलाई बोकेर त्यहाँ लैजान त्यति अफ्ट्यारो हुदैनथ्यो। तर अब एक तल्ला माथी कक्षाकोठा भएपछि मलाई सबै भन्दा पिर नै शौचालय कसरी जाने होला भन्ने लाग्यो। त्यहि भएर म भरसकमलाई पिसाब नै नलागोस् भन्नका लागी ज्यादै कम पानी खानी खान थाले।
तर जति नै कन्ट्रोल गर्दा एकदिन मलाई स्कुल पुग्ने बित्तिकै पिसाब लाग्यो। मैले पिसाब थाम्न खोजे, तर त्यसो गर्दा झन् बेस्सरी च्याप्यो। के गर्ने गर्ने भनेर मलाई एकदमै टेन्सन भयो। साथीहरूलाई बोकाएर तल जान त हुन्थ्यो तर उनीहरूलाी दुख दिन मन लागेन। आफुलाई कस्तो बोझ भएजस्तो अनुभव भयो। केहि उपाय नै नआएपछि मैले रिंगाटा लागे जस्तो गरेँ। यति गरेपछि साथीहरूले अफिस कोठामा लगे, पानी खुवाएर र एकछिन सम्म ठिक नभएपछि रिक्सावाला दाईलाई बोलाएर घर पठाईदिए। घर पुगे पछि बल्ल पिसाब गरेँ। झन्न, त्यो दिन टर्यो जस्तो लाग्यो।
तर त्यसपछि मलाई त हरेक दिन स्कुल पुग्ने बित्तिकै पिसाबले च्याप्न थाल्यो र टिफिन टाईम सम्म थाम्नै नसक्ने हुन थाल्यो र म रिंगटा लाग्यो भन्दै घर आउन थाले। यसरी ३ दिन सम्म यहि कुरा दोहोर्एपछि परिवारका सदस्यहरूले पिर लिएर मलाई नजिकैको क्लिनिकमा जँचाउन लगे। मैले मलाई केहि भएको हैन, पिसाब फेर्नलाई यो सब नाटक गरीरहेको छु भन्न पनि सकिन।
डाक्टरले एकछिन चेक गरेर, केहि दिनलाई खानलाई केहि औसधी दिए र यस्तै दोहोरीरहे, ठुलो अस्पतालमै लगेर टाउको राम्ररी चेक गर्नुपर्छ भने। यस्तो कुराले मेरो बुवा-ममी र स्कुलमा सर र साथीहरूले सबैले पिर लिए।
मलाई अब भने सार्है नराम्रो लाग्यो। सबैलाई यस्तो पिर दिएको आफै सँग रिस उठ्यो र अब चाहि यस्तो गर्दिन भन्ने ठाने। त्यसको भोलि पल्ट स्कुल जाँदा मलाई फेरी पिसाब लाग्यो। जानै पर्ने नभईन्जेल सम्म त कसैलाई केहि भनिन। तर अलि गार्हो हुन थाले पछि; एकजना साथीलाई भने-"मलाई त एकदम पिसाब लाग्यो यार!"
मलाई लागेको थियो, अब उसले झन्झट मान्नेछ। तर उसले त पिसाब लाग्यो भने जाने नि तल भनेर अरू साथीहरूलाई पनि बोलायो अनि मलाई त साथीहरू मिलेर हल्कै सँग शौचालय पुर्याएर पिसाब गराएर ल्याए। त्यत्रो ठुलो सोचेको समस्याको यति सामान्य हल रहेछ। मलाई त मेरो साथीहरूलाई अँगालो मारेर रूनु जस्तै खुसी लाग्यो। त्यसपछि मैले कुनै दिन पनि रिंगटा लागे जस्तो गर्नुपरेन।
तपाईँहरूलाई यो कथा सुनाउदै गर्दा पनि मलाई मेरा सबै साथीहरूको याद आयो र याद आयो- उनीहरूले मलाई दिएको हरेक साथको। यो कथा सुनाउँदा धेरै अघि कतै पढेको यो पङ्क्ति पनि सत्य हो भन्ने लागेको छ - "साथी तिनीहरू हुन्, जस्ले तपाईँको समस्यालाई आफ्नो पनि समस्या ठान्छन्; जस्ले गर्दा तपाई एक्लैले तिनीहरूको समाधान खोज्नुपर्दैन।"